फिटनेसको साथ साथै सन्तुलित र स्वच्छ खाना खानु पर्छ रेणु » Enavanari
फिटनेसको साथ साथै सन्तुलित र स्वच्छ खाना खानु पर्छ रेणु
रेणु श्रेष्ठ, जुम्बा ट्रेनर
फिटनेस एकदमै जरुरी छ । जसरी हाम्रो शरीरलाई खानाको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै व्यायम फिटनेसको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यहि भएर यो फिटनेस भन्ने कुरा मोटो शरीर भएमात्र होइन आफु फिजिकल्ली फिट रहनको लागि पनि गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले बच्चा देखी लिएर बुढा बुढि तन्नेरी जसले पनि गर्न मिल्छ र गर्नु पर्छ ।
फिटनेस कहिले देखी शुरु गर्नु भयो र फिजिकल्लि फिट रहनु पर्दो रहेछ भन्ने कहिले देखी लाग्यो ?
म सानै हुँदा अर्थात स्कुल पढ्दा देखिनै गेम खेल्ने गर्थे, खेलकुद मलाई एकदमै मनपर्ने बिषय थियो । म सात ,आठ कक्षा पढ्दा नै अन्तराट्रिय गेम खेलिसकेको छु त्यो बेला देखीनै म अरु भन्दा फरक थिए । साथिहरु सबै पुतली खेल्थे भने म चाहि वल खेल्ने, स्वीमिङ गर्नेगर्थे । त्यो वेला देखी म यस क्षेत्रमा आकर्षित भएको थिए र नजानिदो रुपमा नै फिटनेसमा लागेको थिए । म प्रोफेसनली लागेको चाहि चार बर्ष जति भयो ।
के फरक पाउनु हुन्छ फिजिक्ल्ली फिट रहदा र नरहदामा ?
त्यो त आकाश जमिनको फरक हुन्छ फिट रहदा र नरहदामा । फिट रहदा हेल्दी भई शरिर हल्का हुन्छ । साथै आफ्नो कामहरु गर्दा सजिलो हुन्छ , माईण्ड फ्रेस हुन जान्छ ।
फिटनेसको साथ साथै खान पानमा ध्यान दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
त्यो त अवश्य पर्छ चाहे फिटनेसमा लागेको होस वा नलागको जो कोहिले पनि खान पानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । गर्ने नगर्ने सवैले सन्तुलित स्वच्छ, सफा र जेपायो त्यहि खाना नखाने हो भने शरिरलाई पनि फाइदा हुन्छ र विरामी पनि होईदैन । अहिले खानाले नै धेरै जसो रोगहरु निम्त्याईरहेको भएर सन्तुलित र स्वच्छ खाना खानु पर्छ ।
अहिले कुन इन्सिटिच्यूटमा सिकाउनु हुन्छ ?
खासै भन्नु पर्दा यहि भन्ने चाहि छैन । मैले पर्सनल ट्रेनिङ दिन्छु । त्यसले गर्दा क्लाईन्टले उहाँहरुलाई सजिलो पर्ने हिसाबले बोलाउनुहुन्छ म त्यहि हिसाबले त्यहि गएर सिकाउने वा ट्रेनिङ दिने गर्छु । प्राय म चाहि फिटनेस स्टुडियो नेपालमा बढी इन्भल्व छु ।